Isivumelwano selayisense | Law & More B.V. | Abase Netherlands
Blog » Isivumelwano selayisense
Okwenziwe ngenqondo amalungelo akhona ukuvikela ukudala kwakho nemibono yakho ekusetshenzisweni okungagunyaziwe ngabantu besithathu. Kodwa-ke, ezimweni ezithile, ngokwesibonelo uma ufuna ukusetshenziswa kwakho kuxhashazwe ukuhweba, ungahle uthande ukuthi abanye bakwazi ukuyisebenzisa. Kepha ufuna ukunika amalungelo amangaki abanye maqondana nempahla yakho enobuhlakani bengqondo? Isibonelo, ngabe umuntu wesithathu uvunyelwe ukuhumusha, ukunciphisa noma ukuvumelanisa umbhalo onelungelo lobunikazi? Noma uthuthukise okusungulile kwelungelo lobunikazi Isivumelwano selayisense siyindlela efanelekile yezomthetho yokwakha amalungelo nezibopho zomunye nomunye maqondana nokusetshenziswa nokuxhashazwa kwempahla enobuhlakani bengqondo. Le ndatshana ichaza kahle ukuthi kuhlanganisani isivumelwano selayisense, yiziphi izinhlobo ezikhona, nokuthi yiziphi izici ezivame ukuba yingxenye yalesi sivumelwano.
Impahla enobuhlakani bengqondo nelayisense
Imiphumela yokusebenza kwengqondo ibizwa ngamalungelo empahla yengqondo. Izinhlobo ezahlukahlukene zamalungelo ziyehluka ngokwemvelo, ukuphatha nesikhathi. Izibonelo ngamalungelo okushicilela, amalungelo ophawu lokuhweba, amalungelo obunikazi namagama okuhweba. Lawa malungelo abizwa ngamalungelo akhethekile, okusho ukuthi abantu besithathu bangawasebenzisa kuphela ngemvume yomuntu ophethe amalungelo. Lokhu kukuvumela ukuthi uvikele imibono ebanzi nemicabango yokudala. Enye indlela yokunikeza imvume yokusetshenziswa kubantu besithathu ukukhipha ilayisense. Lokhu kunganikezwa nganoma iyiphi indlela, kungaba ngomlomo noma ngokubhala. Kunconywa ukuthi lokhu ukubhale phansi ngesivumelwano selayisense. Endabeni yelayisensi ye-copyright ekhethekile, lokhu kudingwa ngisho ngumthetho. Ilayisensi ebhaliwe nayo ingabhaliswa futhi ifiseleke uma kunezingxabano nokungaqondakali maqondana nokuqukethwe ilayisensi.
Okuqukethwe kwesivumelwano selayisense
Isivumelwano selayisense siyaphothulwa phakathi komnikazi welayisense (onelungelo lelungelo lobunikazi) nomnikazi welayisensi (lowo othola ilayisense). Umnyombo wesivumelwano ngukuthi umnikazi welayisensi angasebenzisa ilungelo elikhethekile lomnikazi welayisensi ngaphakathi kwemibandela eshiwo esivumelwaneni. Inqobo nje uma umnikazi welayisensi ehambisana nale mibandela, umnikazi welayisense ngeke asebenzise amalungelo akhe ngokumelene naye. Ngokuya ngokuqukethwe, ngakho-ke, kuningi okufanele kulawulwe ukukhawulela ukusetshenziswa komnikazi welayisensi ngokuya ngemikhawulo yelayisensi. Lesi sigaba sichaza ezinye zezici ezingabekwa esivumelwaneni selayisense.
Amaphathi, ubukhulu nobude besikhathi
Okokuqala, kubalulekile ukukhomba ifayela le- Amaqembu esivumelwaneni selayisense. Kubalulekile ukucubungula ngokucophelela ukuthi ngubani onelungelo lokusebenzisa ilayisense uma kuthinta inkampani yeqembu. Ngaphezu kwalokho, amaqembu kufanele abhekiswe kuwo ngamagama awo aphelele asemthethweni. Ngaphezu kwalokho, ubukhulu kufanele buchazwe ngokuningiliziwe. Okokuqala, kubalulekile ukuchaza ngokucacile ifayela le- into lelo layisense elihlobene nayo. Isibonelo, ngabe kuthinta kuphela igama lokuhweba noma nesoftware? Incazelo yelungelo lobunikazi esivumelwaneni ngakho-ke kuyalulekwa, kanye, ngokwesibonelo, isicelo kanye / noma inombolo yokushicilelwa uma kuthinta ilungelo lobunikazi noma uphawu lokuhweba. Okwesibili, kubalulekile ingasetshenziswa kanjani le nto. Ngabe umnikazi welayisensi angashiya amalayisense amancane noma asebenzise ilungelo lobunikazi ngokulusebenzisa emikhiqizweni noma kuzinsizakalo? Okwesithathu, i- insimu (ngokwesibonelo, iNetherlands, iBenelux, iYurophu, njll.) lapho ilayisense ingasetshenziswa nayo kufanele icaciswe. Ekugcineni, i- ubude kufanele kuvunyelwane, okungalungiswa noma kungapheli. Uma ilungelo lempahla yokusungula linomkhawulo wesikhathi, nalokhu kufanele kubhekwe.
Isivumelwano kufanele futhi sichaze ukuthi hlobo luni lwelayisense. Kunamathuba ahlukahlukene, okuvame kakhulu kuwo lokhu:
Okukhethekile: Umnikazi welayisensi yedwa uthola ilungelo lokusebenzisa noma ukuxhaphaza ilungelo lempahla yokusungula.
Okungakhethi: umnikazi welayisense angakwazi ukunika abanye amaqembu ilayisense ngokungeziwe kumnikazi welayisensi futhi asebenzise futhi asebenzise ilungelo lobunikazi uqobo.
Isoli: uhlobo lwelayisense olukhetheka ngokukhethekile lapho umnikazi welayisensi elilodwa angasebenzisa futhi asebenzise impahla yengqondo khona kanye nomnikazi welayisensi.
Vula: noma yimuphi umuntu onentshisekelo ohlangabezana nemibandela uzothola ilayisense.
Imvamisa imali ephezulu ingatholaka ilayisense ekhethekile, kepha kuya ngezimo ezithile ukuthi ngabe lokhu kuyisinqumo esihle yini. Ilayisense engakhethekile inganikela ngokuguquguquka okungaphezulu. Ngaphezu kwalokho, ilayisense ekhethekile ingahle ingasizi ngalutho uma unikeza ilayisense ekhethekile ngoba ulindele ukuthi elinye iqembu lithengisele umbono wakho noma umqondo wakho, kepha umnikazi welayisensi akenzi lutho ngawo. Ngakho-ke, futhi ungabeka izibopho ezithile kumnikazi welayisense ngokuthi kumele enzeni ngamalungelo akho empahla yengqondo ubuncane. Ngokuya ngohlobo lwelayisense, ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukubeka kahle imibandela ilayisense enikezwa ngaphansi kwayo.
Ekugcineni, kungahle kube nezinye izici okuvame ukubhekanwa nazo kusivumelwano selayisense:
The Imali nenani laso. Uma imali ikhokhiswa, kungaba yinani lezikhathi ezithile elinqunyiwe (imali yelayisense), ama-royalties (ngokwesibonelo, iphesenti lenzuzo) noma inani elilodwa (XNUMX)isamba semali). Isikhathi namalungiselelo okungakhokhi noma ukukhokha sekwedlule isikhathi kumele kuvunyelwane.
Umthetho osebenzayo, inkantolo efanelekile or ukulamula / ukulamula
Imininingwane eyimfihlo futhi ubumfihlo
Ukuhlaliswa kokwephulwa komthetho. Njengoba umnikazi welayisensi uqobo engenalo ilungelo ngokomthetho lokuthi aqale inqubo ngaphandle kwemvume yokwenza lokho, lokhu kufanele kulawulwe esivumelwaneni uma kudingeka.
Ukudluliswa kwelayisense: uma ukudluliswa kungafuneki ngumnikazi welayisense, kufanele kuvunyelwane ngakho ku- isivumelwano.
Ukudluliswa kolwazi: isivumelwano selayisense singaphothulwa ngokwazi. Lolu wulwazi oluyimfihlo, imvamisa lobuchwepheshe, olungafakwanga amalungelo obunikazi.
Intuthuko entsha. Izivumelwano kufanele futhi zenziwe maqondana nokuthi intuthuko entsha yempahla enobuhlakani bengqondo nayo iyahlanganiswa nelayisense lomnikazi welayisensi. Kungenzeka futhi ukuthi umnikazi welayisense uthuthukisa umkhiqizo ngokuqhubekayo futhi umnikazi welayisense ufisa ukuzuza kulokhu. Kuleso simo, kungabekwa ilayisense elingakhethi kuphela lomnikazi welayisense wentuthuko entsha empahleni yengqondo.
Ngokufingqa, isivumelwano selayisense yisivumelwano lapho umnikazi welayisensi anikezwa amalungelo ngumnikazi welayisense wokusebenzisa kanye / noma ukuxhaphaza impahla enobuhlakani bengqondo. Lokhu kuyasiza uma umnikezi welayisense efisa ukuthengisa umqondo wakhe noma ukusebenza komunye. Isivumelwano selayisense esisodwa asifani nesinye. Lokhu kungenxa yokuthi kuyisivumelwano esinemininingwane esingahluka ngokuya ngobubanzi nezimo. Isibonelo, ingasebenza kumalungelo ahlukile empahla yengqondo nokuthi asetshenziswa kanjani, futhi kukhona nokwehluka maqondana nomholo nokukhethelwa. Sethemba ukuthi le ndatshana ikunikeze umbono omuhle mayelana nesivumelwano selayisense, inhloso yaso nezinto ezibaluleke kakhulu kokuqukethwe kwaso.
Ngabe usenemibuzo ngalesi sivumelwano ngemuva kokufunda le ndatshana? Ngemuva kwalokho sicela uxhumane Law & More. Abameli bethu bakhethekile emthethweni wempahla yengqondo, ikakhulukazi emkhakheni we-copyright, umthetho wophawu lwentengiso, amagama okuhweba namalungelo obunikazi. Sikulungele ukuphendula yonke imibuzo yakho futhi futhi sizokujabulela ukukusiza wenze isivumelwano selayisense esifanelekile.
Thumela Previous Indima yeBhodi Lokuqondisa ngezikhathi zobunzima
Post Next Ukudluliswa Kokwenza